သင်္ဘောကြီးမောင်းကြရအောင်။ ~ MSU Portal
6/11/2012 01:01:00 AM Yar Zu2comments
ကျနော်တို့ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေခဏထားပြီး
ရိုးရိုး ပုံမှန်သင်္ဘော တစ်စီးကိုကိုင်တွယ်တာရယ်ကျောက်ချတာရယ် သိသလောက်လေး
ကြုံဘူးတာလေးတွေ အရာရှိတွေကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။(သူကြီးတွေ ကို မပြောပါ)
သင်္ဘောပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးမှန်းနိုင်တာ သူကြီးပါ၊ သူကြီးတစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးတာက
ဆိပ်ကမ်း အ၀င်အထွက် ကမ်းကပ်တာနဲ့ ကျောက်ချ တာ Channeling လုပ်တာလို့ထင်ပါတယ်။
ကျနော်က စာအုပ်ကြီးသမားမဟုတ်လို့ ကိုယ်သိတာကိုဘဲပြောပါမယ် လှေနံ့ဒါးထစ် မမှတ်ယူဘဲ
ဗဟုသုတ အဖြစ်မှတ်ကြစေလိုပါတယ်။ဆရာစားမချန်သိတာလေးနဲနဲကို share လုပ်တာပါဗျာ။
ကျောက်ချတဲ့ ကိစ္စ မလုပ်ခင်
ကျနော် ကိုယ်တိုင် လေ့လာတွေ့ရှိချက် နဲ့ ကျနော်တို့Ship Handling Course တွေ မှာသင်ရတတ်တဲ့ သင်္ဘောနဲ့ပတ်သတ်တဲ့
သိသင့်တာလေးနဲနဲပါးပါးကို Summarize လုပ်ကြည့်ရအောင်။
သင်္ဘောမောင်းနှင်တဲ့ Navigator မှာ အဓိက သိရမှာက Resultant of Relative motion ဘဲ Vector ပေါ့ဗျာ
သင်္ဘော ဦးတည်ရာ Heading၊ သင်္ဘောရဲ့ အရှိန် speed တို့ ကို လာရောက် တိုက်ခိုက် ပြီး လားရာကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တာတွေ External forces တွေ
ကို အမြဲသတိရှိနေရင် သင်္ဘောကြီး အန္တရယ်ကင်းဝေးပါတယ်။
Tidal stream-Cross current
ဒီရေအတက်အကျ မှာ၊ ဒါမှမဟုတ် ရေလက်ကြားတစ်ခုမှာ Geographic အနေ အထားကြောင့် ဖြတ်စီးမယ့်၊ကျွန်းဝိုင်းပတ်ပြီးထွက်လာမယ့်
ရေတွေ ရဲ့ အလျင် ဟာ ရေတိမ်တိမ် မှာ အရှိန်လျော့မောင်းနေတဲ့ သင်္ဘောတွေ ကို အန္တရယ်အပြုနိုင်ဆုံးပါဘဲ။
(ဥပမာ -Port Klang အ၀င် ရေ ကျ ချိန်မှာ Channel အ၀င် နဲ့ ကမ်းကပ်ရ အလွန်ခက်ပါတယ်)
ရေကြောင်းပြက Tug ၃စီး ယူရင် တတ်ယောင်ကားလုပ်ပြီး ၂စီးဘဲ ရတယ်တို့ Bow Thruster ကောင်းတယ်လို့ မလုပ်ပါနဲ့
current က4knots လောက်ရှိလို့ ၁၃.၅ မီတာကျော်တဲ့ heavy vessel တွေ လှည့်ရတာအလွန်ခက်ပြီး အန္တရယ်ကြီးပါတယ်။
ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကို သတိထားရင် သင်္ဘောမောင်းရတာ ပျော်စရာကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံး လူလုပ်ထားတဲ့ Dredged Channel တို့ Break Water တို့ကို အ၀င် တို့ မှာမြေအောက်ကြမ်းပြင် မြေမျက်နှာပြင်
ပြောင်းသွားမှု မညီမညာမှုတွေ ၊ ရေ အလျင် ပြောင်းသွားမှုတွေဟာ သင်္ဘောရဲ့ လားရာကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။
Channel တွေထဲကိုဝင်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ရေအနက် က ၁၀ မီတာ တူးထားတာက မီတာ ၂၀ ဆိုတော့ ရေပြင် မညီရင်
ခေါင်းအ၀င်မှာ Cross current ကို မူတည်ပြီ သင်္ဘော ဘယ်ညာ တိမ်းပါတယ် Speed Log Bottom track မှာ
Bow နဲ့ Stern ဘေးတိုက် သွားနုံး ကို သတိထား Making Way ကို ဘယ်လိုကြည့်နေနေ ရုတ်တရက် အ၀င်မှာတိုက်ခိုက်လာမယ့်
Cross current ကို counter လုပ် ဘို့လိုပါတယ်။
(ဥပမာ - သင်္ဘောက ၆မိုင်နုံးနဲ့ ၀င်ရင် ၂-၃ cross current ကို တန်ပြန်ဘို့ အားနည်းလို့
အရှိန်ကို ၁၀ မိုင် လောက်ကိုတင် လိုက်မယ်ဆို ရင် Quarter Master ရုတ်တရက် ချွေးမပြန်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ၊ သင်္ဘောကို စေခိုင်းရတာလဲ လွယ်သွားတယ်။
အဲဒါ သတိမေ့ရင် သောင်တင်တတ်တယ်။ကိုယ်က မသိဘဲ တက်မကိုင်ကို ညံ့ရသလားဆူနေတဲ့ သုကြီးတွေ ခဏခဏတွေ့နေရတယ်။
Draft in relation to available depth and width ကိုလဲ မမေ့သင့်ဘူး
သူကလဲ တနည်းအားဖြင့်သက်ရောက်ပါတယ် အထူးသဖြင့် VLCC သမားတွေ Bulk သမားတွေပေါ့ အစကတည်းက မှ နှေးရတဲ့ အထဲ
strong set နဲ့တွေ့ ရင် သင်္ဘောကပေကပ်ကပ်လုပ်နေပါရောဗျာ Deep water route တွေ မှာ ၀င်ရှုပ်ချင်တဲ့ ဆရာသမားတွေ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါစေ။
ကွန်တိန်နာတို့ ကားသင်္ဘောတို့သတိထားရတယ် လေတိုက်တဲ့နေရာ သင်္ဘောတည်ဆောက်ပုံခြင်းပေါ်မှာတည်ပြီး Resultant Vector တွေ မတူလို့
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေ့လာစောင့်ကြည့်ပါ။ သင်္ဘောသွားနှုံး တိုက်ခတ်လာတဲ့လေ နှုံးတွေ ပေါ်မှာတည်နေလို့ Thumb rule မရှိပါ။
ကျနော်တို့တွေ့ရတာကတော့ ကွန်တိန်နာမှာ လေပြင်းက ဘယ် သို့ ညာ Bow ကနေ ခပ်စောင်းစောင်းတိုက်ရင် speed ပိုတက်တတ်ပါတယ်။
သင်္ဘောမောင်းရန် ကိုယ့် ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်တာတွေလဲ အကုန်အသင့်ရှိပါစေ။
Internal Forces များ ကတော့
Engines (ahead ..astern) Rudder (ဘယ်၊ညာ) Bow thruster(များသောအားဖြင့် ၃မိုင်ထက်နည်းမှ Effective ဖြစ်ပါတယ်)
တစ်ခြား Stern Thruster တို့
Mooring လိုင်း တစ်ချောင်းပို့ပြီး ဆွဲသွင်းတာတို့ နဲ့ ကျောက်ချပြီး ဖင်လှည့်ဝင်တာတို့ အသုံးနဲတာတွေ ခဏ ဖယ်ထားရအောင်။
တကယ်က ရှိတာတွေကို သုံးတတ်ရင် Pivoting Point သင်္ဘော အရှိန်နဲ့ လိုက်ပြောင်းနေတဲ့ သင်္ဘော အားပြုလှည့်နေရတဲ့
ဗဟိုရ် ၀င်ရိုး တည်နေရာ နဲ့ resultant vector ကိုစောင့်ကြည့်တတ်ရင်
အသားကျနေတဲ့ ခိုင်းနွားတစ်ကောင်လို သင်္ဘောကိုလိုရာစေနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ က Astern ပေးလို့မှ ခဏစောင့်ပါလို့ပြောတဲ့ စက်ချူပ်နဲ့ Superintendent ကို အလုပ်သာဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့။
နောက်ဆုံး Pilot တွေ သုံးတဲ့ Transit points တွေ ရှိပါသေးတယ်။
ရေကြောင်းပြ တော်တော်များများဟာ သူကြီးကို အထင်သေးတတ်ပါတယ် သူတို့လောက်မသိဘူးတွေးပါတယ်
သင်္ဘောမောင်းတာ ကြာလာပြီး Observation sense and reasoning ကောင်းတဲ့ သူကြီးတွေကလဲရေကြောင်းပြတွေကို
အထင်မကြီးထားပါဘူး ၊အထင်တော့ မသေးရပါဘူး။
Mutual respect မရှိရင် Team work မရှိဘူးလေ။
သင်္ဘော Navigator တွေ သင်္ဘောပေါ်ရောက်ရင်
အရင်ဦးဆုံးသိရမှာကတော့ Manoeuvrings Characteristics , Turning Circle and Stopping distance ပါ
ယေဘူယျ ကတော့ သင်္ဘောတွေဟာ ၁-၂ မိုင် ဆက်သွားပြီး ၁၀- ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာမှရပ်တတ်ပါတယ်
အရေးပေါ်ဘေးကို ဆွဲကွေ့ရင် သင်္ဘောအရှေ့ဘယ်လောက်ဆက်သွားပြီး
(များသောအားဖြင့် Container တွေမှာ3-4 cable၊ ဘေးတိုက်ဘယ်လောက် ရောက်မလဲ 3-4 cable၊
အရှိန်ကဘယ်လိုကျသွား မလဲ အကြမ်းပျဉ်းသိထားသင့်တယ် အဲဒါဆို စိတ်ချယုံကြည်စွာ သင်္ဘောတွေ ကို ကပ်ရှောင်နိုင်ပါတယ်။
Wheel House မှာ ရပ်နေတဲ့ အခါ Elevation ကြောင့် သင်္ဘော Bow and Stern နေရာဟာ မိမိမြင်နေရတာထက်
အများကြီးတိုတယ်ဆိုတာကိုပါသိထားသင့်တယ်။ကိုယ်စီးနေတဲ့သင်္ဘော ကြီး ကို ချစ်သူမျက်နှာကြည့်သလို ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
တစ်ခြားအထောက်အကူပြုတဲ့ External Forces တွေ ကတော့
လေးလေးစားစား ဆက်ဆံပါ၊ လက်ဆွဲနုတ်ဆက်ပါ၊ ပြုံးပြပါ၊ ပီယ၀ါစာ ဆိုပြောပါ လိုအပ်တာကူညီပါ။
ကျေးဇူးတင်ကြောင်း သူ့အသက်အန္ထရယ်ကို ကိုယ်က အလေးထားကြောင်းသိပါစေ။ Bridge Wing မှ ထွက် နုတ်ဆက်တတ်ပါစေ။
သူ့ဆီ က Local Info တွေ ဟာ အလွန် အသုံးဝင်ပါတယ်။
ကိုယ်သင်္ဘောဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိကြောင်း Indirectly Indicate လုပ်ပါ သူတို့ Respect ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။
မသိရင်ဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ မေးပါ စောင့်ကြည့်ပါ အခြေအနေ မဟန်ရင် ၀င်ကူပါ။
သာမာန် Tug တစ်စီး (အသေးဆုံးဟာ ၁၂၀၀-၁၅၀၀ HP) တောင် Bow Thruster ၂၀၀၀ HP ထက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
ရေကြောင်းပြတောင်းဆိုတာကို အငြင်းမပွားပါနဲ့ သူတို့ အလိုရှိသော နေရာမှာ Tug Make Fast လုပ်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။
(Conventional )ရှေးဟောင်း ရိုးရိုး ဆွဲ၊တွန်း Power lesser than 1500HP တွေနဲ့
အလျှင်အမြန်နေရာကူးပြောင်းကာ Angle မျုိုးစုံမှ တွန်းထိုးဆွဲ ယူနိုင်တဲ့ ခေတ်မှီ Tractor/Pusher 3000-5000HP များ လို့ပဲ
ယေဘူယျခွဲပါတယ် -အဲဒီလိုအသုံးဝင်ပုံခွဲသိယုံနဲ့ ရေကြောင်းပြရဲ့ Respect ရနိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောတစ်စီးဟာ ပုံမှန် ၅-၆ မိုင် လောက်အထိ steerage နိုင်ပါတယ် momentum အရှိန်ကုန်ရင် steerage ပျောက်ပါတယ်
com-fine water မှာ ဆိုရင် ဘေးပရောဂမပါလို့ ၃-၄ မိုင် လဲ steerage & ရတတ်ပါတယ်
သို့ပေမဲ့ Open waters မှာတော့ ၅မိုင်အောက်ဆို တက်ကိုင်မရတတ်ပါဘူး။ (ဒါက ကွန်တိန်နာသင်္ဘော အများစုကိုဆိုလိုပါတယ်)
ပုံမှန် သင်္ဘောတွေဟာ အများအားဖြင့် Single Screw Right Handed Propeller တွေ ၉၀% ဖြစ်တာမို့သူ့အသုံးကိုဘဲအဓိကပြောပါ့မယ်။
(Left hand/ Control Pitch/Twin screw တို့ ကတော့ ကြုံမှဘဲ Notes တွေ ရှိပါတယ်။
Engines မှာလဲ Turbine ထက် Diesel Engines က ပို Response ကောင်းတာ မမေ့သင့်ပါ။
Rudder ကို astern မှာ amid ship လုပ်လုပ် မလုပ်လုပ် အကျိုး သက်ရောက်မှု ကနည်းပါတယ် Momentum ကို အကြာကြီးသုံးမှသာ
အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ Reverse resultant ဖြစ်ပါတယ်။
Single Right Handed
သင်္ဘောကို Astern ပေးရင် သင်္ဘော ဦးက STBD ကို လိုက် ရိမ်း Cam ပါတယ် အဲဒါ ကို Transverse Thrust လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်
သူ့ကို Ship handling မှာ advantage ယူသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Momentum ရလာရင် Dead slow astern မှာတင် ၅ ဒီဂရီ Rate of turn ထိရတတ်ပါတယ်။
Anchoring with ( Single Right Hand Propeller only)
ကျောက် ချမယ်ဆို လုပ်ရမှာကို Points တွေနဲ့ ပြောပြမယ်။
အရေးကြီးတာက နေရာရွေးဘို့ပဲ Seabed ကတော့ Chart မှာရှိတဲ့အတိုင်းဘဲရမယ်လေ။
1. Echo sounding သည် Flat line ဖြစ်နေဘို့ အရေးကြီးပါသည်။ ချခါနီးရင် သေချာထပ်ကြည့်ပါ Graph မှာ ပင်လယ်မြေပြင် လုံးဝညီညာနေပါစေ။
Slope မှာ ကျောက်ချမိရင် သင်္ဘော အလှည့်မှာ ကျောက်နေရာ ရွေ့ ပြီး Drag ဖြစ်နိုင်သလို၊ မတ်စောက်နေရင်
ဥပမာ ၂၀ မီတာ က နေ ၃၅ ..၄၀ ကိုဆင်းသွားတဲ့နေရာမျိုးမချရပါဘူး။
ကျနော် မီတာ၇၅-၉၀ Algeciras မှာကျောက်ချ ဘူးပါတယ် ရေနက်ပြီး ကျောက်ကြိုးကို ရေစီးက တွန်းလို့ တော်တော် နဲ့
သင်္ဘော Brought up ဖြစ်မဖြစ်မသိနိုင်ပါဘူး၊ ရေထဲက တောင်ထိပ်လိုနေရာမှာ ချရတာဖြစ်လို့ အရမ်းတိကျရပါတယ်။
2 shackle ကို ရေထဲ မြန်မြန် walk back လုပ်ချက်ချင်း ဂီယာဖြုတ် ပြီးLet go လုပ်ရပါတယ်။
နေရာကျင်းတော့ stern way မရပါ တော်ကြာ မီတာ၁၀၀ ကနေ ၂၀၀ ကို ရောက်ရင် ကျောက်လွတ်ကျပြီး ဆုံးရှုံးရမှာမို့
2. ကျောက် ကိုဘယ်ညာ တစ်လှည့်စီဘဲ သုံးကြပါတယ် Port / Stbd ရွေးစရာ သိတ်မလိုပါဘူး
ဒါပေမဲ့ ခဏတစ်ဖြုတ်နေတာမျိုး(သို့) SUEZ လိုနေရာမျိုးမှာ သေချာတဲ့ ပိုမြန်တဲ့ ကျောက်ကိုဘဲသုံးသင့်ပါတယ်။
Stbd တွေ က ပိုကောင်းတာ တွေ့ရတယ် (ကိုယ်မြင်တာပြောတာပါ)
3. ရေနဲ့လေ အားသာတဲ့ဘက်ကို သင်္ဘော လိုက်လည်ပါသည်။ အများအားဖြင့်တော့ ရေစီးကြောင်းမှာ swing နေပါသည်။
သင်္ဘောတည်ဆောက်ပုံ ရယ်၊ Windage ရယ၊် Draft ရယ်၊ ရပ်ထားတဲ့နေရာရဲ့ ရေစီးကြောင်း နုန်း ရယ်၊
လေ အကာအကွယ် ရယ၊် မတူနိုင်တဲ့အခါ သင်္ဘောတွေ Direction မတူ ပေမဲ့ Anchor Holding ဖြစ်နေကြတာတွေလဲ ကြုံနိုင်ပါတယ်။
4. သူများသဘောင်္တွေheading နည်းတူ ဦးကိုတည်ပြီး မှ ကျောက်ချရမှာဖြစ်လို့ (မြန်မြန် brought Up ဖြစ်မဖြစ် သိနိုင်လို့ပါ) ။
ပထမဦးစွာ Astern ဆွဲ ရင် STBD ကို Bow cam မှာ ဖြစ်လို့ သင်္ဘော ရပ်မဲ့အချိန် Heading ဟာ ကိုရပ်လိုတဲ့ Direction
ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို ကြို ညှိ ပြီး approach လုပ်ရပါမယ်။
(ဥပမာ ကျောက်ချမယ့် Heading က True North 000 ဆိုရင် 350 လောက်တည်ပြီး ၀င်ပါ head way 6-10 Knots နဲ့ ၀င်လာပြီး ချမည့်နေရာနဲ့3cables
လောက်အလိုမှာ Astern ကို Dead slow/ slow ဆွဲ လိုက်ရင် Bow က STBD ကို အသွား သင်္ဘော အရပ် အတော်နေပါဘဲ.
အရင်က propeller wash Gangway ရောက်ရင်ပေါ့၊ အခုခေတ် သင်္ဘောတွေ ပိုရှည်တော့ Mid-ship လောက်ရောက် ရင် ဒါမှမဟုတ်
Fixed Transit point ကြည့်ရင် ရပ်မရပ်သိပါတယ်။
ကျနော်တို့ က တော့ အလွယ် Ecdisc ရဲ့ vector ကြည့်တတ်ပါတယ်။ Misleading လုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး counter checking အနေနဲ့ သုံးသင့်ပါတယ်။
သင်္ဘော ကျောက် Drag ဖြစ်မဖြစ်တောင် Ecdisc vector ကို ကြည့်ရင် History ကို ကြည့် ရင် သိပါတယ်။
5.Hard over နဲ့ကွေ့ ရမယ်ဆိုရင် သင်္ဘောအကွေ့မှာ အရှိန်ကျသွားမှာရယ်၊ လိုအပ်တဲ့ Rate of turn ရဘို့ Engines ကို အတိုးအလျှော့ကစားပေးရပါတယ်။
ဘေးက ရေစီးကြောင်း ကြောင့် Port or Stbd ကို Swing/Drift နေရင် တော့ Bow Thruster ရှိရင် ခေါင်းငြိမ်အောင် ထားပြီးမှ Anchor ချပါ
မရှိရင် အစောထဲက Compensate လုပ်ထားပါ များသောအားဖြင့်Complete stoppage ထက်စာရင်alittle sternway မှာ Let Go လုပ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
Fluke ပေါ်မှာ ကျောက်ကြိုး သွားမပုံဘဲ Foul လဲ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းသွားပါတယ်။
6.ကျနော် ကတော့ Astern 0.6 Knots လောက်မှာ ရေ အနက် ပေါ် မူတည် ပြီး Let go or ရေအနက် မီတာ ၃၀-၄၀ ကျော်ရင် တစ်ချို့ က
one shackle လောက်ရေထဲနှစ်ပြီး walk back လုပ် ပါတယ် ၊
အရေးကြီးတာက ကျောက်ကြိုးကို ၀ိတ်မျှအောင်ပုံဘို့ပါဘဲ။ Little stern way မှာ3shackles လောက် ရပြီး Bow Swing ကို ထိန်းထားရင် ကျောက်ကြုိုး ဟာ
short stay ပြကိုပြ မယ်ဆိုတာ ပြေးကြည့်စရာမလိုပါဘူး 1 O clock2O clock for STBD ANCHOR၊ 11 O clock 10 O clock for PORT ANCHOR
ဆို brought up က ဖြစ်ချင်နေပါဘီ။ မဟုတ်ရင်တော့ Engines/wheel/Bow Thruster တို့နဲ့ ထိန်းကျောင်းပြီး သင်္ဘော weight ကို holding လုပ်နေတာ
7.ကျန်တာကိုတော့ စာအုပ်ကြီးအတိုင်း သင်္ဘော အမျိုးအစား ,ရေ အတိမ် အနက် ,ရာသီဥတု, ကြာကြာနေမနေ
အနီးဆုံးသင်္ဘော နဲ့ အကွာအဝေး ချိန် စပြီး Vessel Turning Circle at Maximum stretch တွက်ပြီ6း,7 , 8 cables ပေးပေါ့
အနီးဆုံး သင်္ဘောက တော့7cable ထက် မနီးသင့်ပါဘူး SUEZ လိုနေရာမျိုးတော့ 2-3 cable circle အတွက်4shackles လောက်ဘဲ ထားကြတာဘဲ။
ကျောက်ပြန်မ ရင် အဓိက က ကိုယ်ဘယ်လိုချခဲ့လဲ သူဘယ်လောက် stretch out ဖြစ်လဲ ခန့်မှန်းထားပြီး
ကျောက်ကြိုးကို Up and Down မှာ အမြဲရောက်အောင်၊ ရအောင်ထားပြီး ဆွဲတင်ခြင်းသာ အကောင်းဆုံးပါ။
Weight လျှော့နည်း၍ Windlass လဲ သက်သာ၊ကျောက်လဲ သက်သာ Foul လဲ ဖြစ်ဖို့ နည်းသွားပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Thumb rule အနေနဲ့တောင်သုံးလို့ရပါတယ်။
Ship Handling Process တစ်ခုလုံးဟာ Engine Astern ဆွဲရင် Bow ဘယ်ကို Cam မလဲ နဲ့ Pivoting point ဘယ်နေရာကို ရွေ့သွားသလဲ
အပေါ် မှာ Plan ဆွဲ ပြီး Execute လုပ်ရတာပါ။
သင်္ဘော တွေ ကမ်း ကပ်တာ ကမ်းခွာရင်၊
Tug တွေ ကြိုးချည်မချည်၊ တွန်းမလားဆွဲမလား၊
Port Swing မလား Stbd swing မလားအားလုံးဟာ
ဒီရေ အတက်အကျ Flooding or Ebbing ၊ နုန်း များမများ
Onshore wind Offshore wind လား
သင်္ဘော Right handed /Left handed
Bow and Stern Clearances ၊
Turning Basin ထဲက swinging /Turning room ၊
Available Tugs တွေ အပေါ်ကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ရတာပါ။
သင်္ဘောမောင်းရတာ အရမ်း စိတ်ကူးကြည့်ရပါတယ်။
ကိုယ့် လုပ်တဲ့ Action မှန်ရင် စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်ရတယ်။ ဖြစ်မလာရင်တော့ တစ်ယောက်ယောက် က
တစ်ခုခုသေချာပေါက်လွဲနေပြီ ဆိုတာ ယုံထားလိုက် ပြီး အခြေအနေ ကို ချက်ခြင်း ပြန် Assess လုပ်ပေတော့။
ကျနော် သူကြီးဖြစ်ကထဲက အရာရှိတိုင်းကို အထက်ပါနည်းတွေ ပြောပြသင်ပေးပြီး အလှည့်ကျ အတွေ့အကြုံပေးပါတယ်
ရာသီဥတုဆိုးရင် ရေးစီးသိတ်သန်နေရင် ကျောက်ချရတာ အရမ်းခက်ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံ ရှိတော့သူတို့လဲ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုပါ သိလာကြပါတယ်။ သူကြီးဖြစ်တော့မယ့် ကုန်းချုပ်ဆို ပိုပြီး အခွင့်ရေးပေးပါတယ်။
ကိုယ့် တုန်း က ဘယ်သူမှ သေချာ မသင်ပေးဘဲ စမ်းတစ်ဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်တွေ များခဲ့လို့ အခုပြန် ပြောပြတာပါ။
(ရေးတာရေးရတာပါဗျာ) အားတော့ မရလှဘူး။ ကျနော် ဘယ်စာအုပ်ကိုမှ မဖတ်ထားဘဲ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံကိုပြန်ရေးတာဖြစ်လို့
စာအုပ်တွေနဲ့ နည်းမတူ လွဲနေခဲ့ရင် ပြန်မရှင်း မငြင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကို လဲကြို ပြောပြချင်ပါတယ်။
Ye tayzar aung says:
June 11, 2012 at 11:50 AM Reply
Very Useful Post for Navigation Officers Bro :) Thanks for your Post .. Plz share More Posts :)
September 19, 2012 at 1:22 PM Reply
Very proud of you,bro